Waqtigaan Waa Kan Ugu Wanaagsan Ee Lamaantaada Lagula Kulmo Sariirta (Daraasad) - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Waqtigaan Waa Kan Ugu Wanaagsan Ee Lamaantaada Lagula Kulmo Sariirta (Daraasad)
Goorma ayaad u maleyneysaa inay tahay waqtiga ugu wanaagsan ee lamaanaha inay raaxeystaan? Waxaa jira dad badan oo aanan garanayn waqtiga ugu wanaagsan ee ay xaasaskooda la raaxeystaan.
Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in subixii uu yahay waqtiga ugu wanaagsan ee ay lamaanuhu is galmoodaan.
Cilmi barista ayaa lagu sheegay in subaxdii ay lamaanaha u wanaagsantahay in jacaylka ay sameeyaan maadaama heerar tamarta ninka iyo naagta ay yihiin kuwo sareeya subixii, waxaa sidoo kale aad u degan oo maskaxdooda oo aanan ku mashquulsaneyn nolol maalmeedka.
Iyadoo subaxdii ay tahay waqtiga ugu wanaagsan ee ay lamaanuhu wada raaxeystaan, hadana cilmi baaris kale ayaa heshay in saacadda 5:48 am ee habeenimo ama xlliga uu waaga baryi rabo ay tahay waqti aad u wanaagsan kulanka sariirta taasoo ay sheegeen inay u badantahay in lamaanaha ay gaaraan hadafkooda.
Professor Ashley Grossman, oo ku taqasusay daaweynta raganimada ayaa sheegay in ninka subaxdii marka uu indhaha kala qaado heerar kacsigiisa uu aad u sareeyo 25 ilaa 50 boqolkiiba marka la eego waqtiyada kale.